Midziyo yemumba Vagadziri & Vatengesi - China Imba midziyo yemagetsi Fekitori
Iyo yakakura nzvimbo inoteedzera umhutu nechamupupuri inoyamwa umhutu. Hapana chakaipa kumuviri wemunhu uchiuraya umhutu. Anion kucheneswa.Inowanikwa neiyo micro USB uye rechargeable uye zviri nyore kwazvo kutora kunze.
Chidiki uye chinotakurika chekupfeka chinokachira chine ceramic ndiro, PC yepamusoro-giredhi muviri muviri 2 mu1 yakaoma & yakanyorovera maviri-nzira ironing. Push-bhatani kutanga kwemushandisi nyore. 110ml yakakura chinzvimbo chemvura tangi, inogona kuve ironing kwemaminetsi 8-10.
Rimwe bhatani mashandiro ari nyore, maminetsi mashanu auto akavharwa. 12V yakaderera voltage guruva-chiratidzo & isina mvura giredhi IP54, yakachengeteka uye yakasimba.Super yakaderera ruzha dhizaini, ruzha danho risingasviki 60dB. Diki inotakurika saizi, iri nyore kutakura, uye zvakare inogona kushandiswa sebhokisi rezvishongo. Nyorera magirazi, zvishongo, wachi, reza, dentures, nezvimwe.
4-in-1 multifunctional isina tambo yemagetsi mop nemaviri kupeta mapedhi inounza iwe chiitiko chitsva chekukorobha / kunyorera / kupurisha pasi. Wireless, nyore kutakura ine rechargeable 3200mAh Lithium bhatiri, marefu-anomhanya maitiro.Professional pasi pasi waxer & polisher: ine 300ml hombe yemvura tangi kana wakisi mumiriri.Ruzha ruzasi pasi pe30dB. Inobvisika uye inogona kutsuka Nano mop musoro.Zvakanaka kuchenesa matangi akasiyana. Nechiedza chemwenje chekubatsira kujekesa nzvimbo dzine rima pazvinenge zvichidikanwa.
Multifunction isina tambo pasi pesher uye yekutsuka inowacha chinhu chitsva chinoshambidza chakabatanidza maficha anosanganisira: Wet kuwacha uye yakaoma kupukuta panguva imwe chete; Kuzvichenesa-wega uye kuchaja kwakavakirwa kwakabatana; Mvura yakachena netangi remvura yakasviba zvakaparadzaniswa; Simba rekutsvaira rakasimba uye kugeza nyoro kwakabatana. Cordless yakagadzirirwa neinosvikika bhatiri pack; 17-30 min inomhanya nguva mu Standard / Max modes; Chidzitiro che LED chinoonekwa chekushanda chinzvimbo; UVC mwenje yakavakirwa-mukati mabhakitiriya uye guruva mite kuuraya; Izwi rinoyeuchidza kushanda, uye zvinonakidza kuwanikwa.